Myanmar Blog Directory: 2006
ဇော်ဂျီ ယူနီကုဒ် ဖြင့် မြန်မာစာ ရိုက်ရန်
ပထမဆုံး ဇော်ဂျီ လက်ကွက်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး အင်စတောလ် လုပ်ပါ။ [Link]။ စက်ထဲတွင် အခြား မြန်မာ ယူနီကုဒ် အမျိုးအစားများ မရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။ ရှိနေခဲ့ရင် Uninstall လုပ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဇော်ဂျီ အင်စတောလ် လုပ်ပြီးလျှင်-
2. Regional Language Box မှ Language ဆိုသော ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပါ
အဆိုပါ Box ထဲမှာ Default Input Language ဆိုတဲ့ နေရာလေးကို စစ်ဆေးပါ။ ဇော်ဂျီ ကီးဘုတ်ကို မြင်နေရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အောက်ဆုံးက -
5. Desktop မှာ Keyboard အလွယ်တကူ ချိန်းနိုင်ရန် အဆိုပါ ဗောက်စ်ထဲမှ အကွက် လေးများကို Check လုပ်ပေးပါ။
6. OK နှိပ်ပါ။
အဲဒီအခါ ၀င်းဒိုးစ်ရဲ့ အောက်ညာဘက် နာရီအချိန် ပြတဲ့ နေရာမှာ ကီးဘုတ်ပုံလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
7. မြန်မာ စာသားကို ရိုက်လိုတဲ့အခါ Clt+Shift ကိုနှိပ်ရပါမယ် (၀ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ၀ဘ်ပေ့ခ်ျ များတွင်သာ သုံးနိုင်သည်)။ အင်္ဂလိပ်စာကို ရိုက်လိုလျှင် အဆိုပါ Clt+Shift ကို ထပ်နှိပ် ပေးရပါမည်။
မှတ်ချက် - ဇော်ဂျီ ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ်သည် ဖိုင်းယားဖောက်စ် 1.0.5.1 ဖြင့်သာ အကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဖောင့် မသွင်းတတ်သူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ လင့်ခ်တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
How to Install Zawgyi-One Font Properly
ဒီဘလောခ့်ကို မြန်မာလို စရေးချိန်ကစပြီး အမေးအခံရဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ မြန်မာစာတွေ ဘာလို့ မမြင်ရဘဲ ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းပြရတာလည်း အကြိမ်ပေါင်း တစ်သိန်းလောက် ရှိနေပါပြီ။ တစ်ချို့ကလည်း ဖောင့်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပါဆိုတော့ လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးရင် Desktop ပေါ်မှာ တင်ထားလိုက်ပြီး အဲဒီမှာ တစ်သွားတယ်။ တစ်ချို့က ဖောင့်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်တယ်။ အထဲက အာအေအာ ဖိုင်ကို ဖြေဖို့ WinRar ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို မသိလေတော့ အဲဒီ ဇစ်ဖိုင်ကြီးကို ဖောင့်ဖိုင်ထဲ သွားထည့်တယ်။ တစ်ချို့က ဒေါင်းလုဒ်လည်း လုပ်တယ်၊ C:\_windows\_Fonts ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်ထရီ မှာလည်း သွားထည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဖောင့်ကို မမြင်ရသေးတော့ ဆက်မလုပ် တတ်တော့ဘူး။ အဲလို C:\_windows\_fonts မှာ သွင်းလို့ မရဘူးဆိုရင် Start>Control Panel>Fonts ကနေ သွင်းပေးရပါမယ်။ အဲဒါမှ ကျွန်တော်တို့ ဇော်ဂျီတစ်စုကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ဖောင့်မသွင်း တတ်သေးသော ကွန်ပြူတာ ယူဆာ များအတွက် အမှတ်တရ အချက်ပြ လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။ ဒီလိုပြောလည်း မြင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ် လိုလေး မှုတ်ပေးရဦးမယ်။
Tags : Myanmar Fonts , How to Install Myanmar Unicode Font, Zawgyi Font , Knowledge